रोग पत्ता लगाउन रेडियोलोजी: जानी राखौं यी उपकरण बारे
मक्कर बहादुर हमाल
सन् १८९५ मा विल्हेल्म रोन्टजनले नोभेम्बर ८ मा एक्स–रे आविष्कार गरेका हुन्। चिकित्सा विज्ञानमा नोभेम्बर ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय रेडियोलोजी दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ । विकिरणको प्रयोगद्वारा शरीर भित्रका अङ्गहरूको जानकारी पाउन सक्ने भएकाले एक्स–रेले चिकित्सा विधामा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।
रेडियोलोजी अन्तर्गत विकिरणयुक्त एक्स–रे, फ्लुरोस्कोपी, म्यामोग्राम, सिटिस्क्यान तथा विकिरणरहित अल्ट्रासाउन्ड, एमआरआई लगायत प्रविधिहरू पर्छन् । कम समयको प्रयोग गरेर धेरैभन्दा धेरै शरीरका भित्री अङ्गहरूमा भएका समस्याको जानकारी दिनसक्नु रेडियोलोजीको प्रमुख चुनौती हो।
एक्स–रे विकिरणको प्रयोग गरेर शरिरका विभिन्न भागको श्यामश्वेत चित्र तयार पारिन्छ। शरिरको हड्डी भाँचिएमा वा फोक्सो सम्बन्धि जानकारी लिन एक्सरेको सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ। एक्सरेले छेड्न नसक्ने बेरियम जस्ता कन्ट्रास्टको प्रयोग गरेर आन्द्रा, पेट लगायतका घाउ, क्यान्सर हेर्न सकिन्छ।
फ्लुरोस्कोपी, एन्जियोग्राफी र म्यामोग्राफी
फ्लुरोस्कोपीले लगातार न्यून एक्स–रेको प्रयोग गरि प्रत्यक्ष भिडियो चित्र बनाउँछ। यसबाट शरीरका विभिन्न अङ्गहरु प्रत्यक्ष कम्प्युटरमा हेर्दै सानो मात्र घाउ बनाएर शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ। यसमा बेरियम र आयोडिनको प्रयोग गरेर पाचन नलि र रक्तनली हेर्ने तथा विभिन्न अङ्गको कार्यप्रणालिलाई प्रत्यक्ष हेर्न सकिन्छ। त्यसैगरी एन्जियोग्राफिमा शरीरमा एक्सरेले छेड्न नसक्ने कन्ट्रास्टको प्रयोग गरेर एक्सरेको सहायता द्वारा रक्तनली र मुटु हेर्ने गरिन्छ। हृदयाघातको खतरालाई पूर्वानुमान गर्न यसले मद्दत गर्दछ। म्यामोग्राफिमा पनि न्यून एक्स–रे प्रयोगद्वारा स्तनको गाँठाहरु तथा अन्य समस्याको जाँच गरिन्छ।
सिटी स्क्यानमा मानिस वरिपरि एउटा गोलाकार मेसिन हुन्छ, जसले लगातार एक्सरे र कम्प्युटरको सहाराले शरिरको विभिन्न तह–तहमा विभिन्न कोणबाट चित्र जोडेर ३ डाइमेन्सल चित्र बनाएर शरिरका भित्री भागहरु अध्ययन गर्दछ। यसले सामान्यतया अरु प्रविधि भन्दा बढि विकिरण प्रयोग गर्दछ। यसको प्रयोग चिकित्सा संकाय बाहेक पुरातत्त्व विज्ञानले पनि विभिन्न अन्वेषणका निमित्त गर्दछ।
एमआरआर्इमा चुम्बकको प्रयोगले शरीर भित्रको पानिमा रहने हाइड्रोजनको न्यूक्लियस (प्रोटोन) लाई उत्तेजित पारेर शरीरका भित्री अङ्गहरुको चित्र कोरिन्छ। यसमा शरीरलाई विकिरणको खतरा रहँदैन। तर चुम्बकले आकर्षण गर्न सक्ने साधन प्रयोग गरेका हरुमा यसको प्रयोग खतरापूर्ण हुन्छ। रगतमा अक्सिजनको मात्रा हेरेर गरिने एफ-एमआरआर्इ को प्रयोगद्वारा विभिन्न उत्तेजना प्रति हाम्रो दिमागले दिने प्रतिक्रियाको अध्ययन गरेर मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अध्ययन गर्न मद्दत गर्दछ।
इलास्टोग्राफिमा अल्ट्रासाउन्ड वा एमआरआइको प्रयोग गरेर अङ्ग हरुको लचिलोपना मापन गरी विभिन्न रोगको बारेमा अध्ययन गरिन्छ। टेक्टाइल इमेजिङमा स्पर्शलाई चित्रमा परिणत गरेर स्तन, प्रोस्टेट, मांसपेशी लगायतको अध्ययन गरिन्छ।
यस अन्तर्गत माथिका विभिन्न प्रविधिको प्रयोगद्वारा सानो मात्र घाउ बनाएर रोग पत्ता लगाउने तथा निदान गर्ने गरिन्छ। शरीरका भित्री अङ्गहरु बाट पिप, पानी वा मासुको टुक्रा निकाल्ने, मुटु, कलेजो, मृगौला लगायत अन्य अङ्गमा पाइप लगाएर बन्द भएको प्रवाहलाई पुन: खोल्ने; रक्तस्राव लाई रक्तनलिमा क्वाइल हालेर रोक्ने, शरीरका रक्तनलीमा अनावश्यक प्रवाह रोक्न फिल्टर लगाउने, क्यानसर ग्रस्त भागलाई काटेर निकाल्ने तथा जाँचको लागि स्याम्पल निकाल्ने, दिमागमा रक्तस्राव भएमा रोकथाम गर्ने, पक्षघातको उपचार गर्ने लगायतका कार्यहरु पर्दछन्।
रेडियोलोजिले अन्य चिकित्सा संकायसँगको सहकार्यमा रोग पत्ता लगाउन र उपचार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। बढ्दो रिसर्च र प्रविधिको फड्कोले यो संकायलाई दिनानुदिन हिजो भन्दा बढी उत्कृष्ट बनाउदै लगेको छ। शरीर चिरेर नै गर्न पर्ने कति कार्यहरु आज शरीर नचिरिकनै सम्भव भएका छन्। अन्य विभिन्न संकायहरुको रोग पत्ता लगाउन र उपचार गर्ने रेडियोलोजिले सदैव हातेमालो गर्ने गर्दछ। रोग पत्ता लगाउन मद्दत गर्ने विधाको रूपमा सुरु भएको रेडियोलोजी अहिले विभिन्न नयाँ प्रविधि र आविष्कार सँगै अत्यन्त परिष्कृत र आधुनिक चिकित्सा विधि बनेको छ।
एक्स–रे र अल्ट्रासाउन्डको प्रयोग ले रोग अनुसन्धानका लागि देशभरि फैलिन थाले पनि सिटिस्क्यान, एमआरआई तथा निदानात्मक रेडियोलोजीको प्रयोग अझै सीमित छ | न्यून विकिरणको प्रयोग र न्यून जोखिम बहनद्वारा उच्च गुणस्तरको उपचार प्रवाह गर्न सक्नु नै रेडियोलोजिको प्रमुख उद्देश्य र भोलिको चुनौति हो।
(हमाल कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान टिचिङ अस्पताल जुम्लामा कार्यरत छन्)
९. पिँडौला फर्कने समस्या : कारण र उपचार
१०. कर्मचारी समायोजन : संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार गर्‍यो २७ प्रश्न